FireFox Keylogger တဲ့ဗျား — MYSTERY ZILLION
FireFox Keylogger တဲ့ဗျား
FireFox Keylogger ဆိုတာပေါ်နေပါတယ်။ FifeFox ရဲ့ addon တစ်ခုပါပဲ။
FireFox သုံးနေတုန်း ကီးဘုတ်က ရိုက်သမျှကို မှတ်ထား သိမ်းထားပေးတဲ့ addon လေးပါပဲ။
အကောင်းဖက်ကသုံးရင်တော့ ပြဿနာမရှိလှပေမယ့်။ ဆိုင်မှာ သုံးတဲ့သူတွေ သတိနဲ့ စစ်ဆေးပြီးမှ သုံးရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
အဲဒါ တင်ထားမထားကို FireFox ရဲ့ tools --> Add-ons ကို ထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
disable လုပ် လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်သုံးနေအခါ disable လုပ်ထားချင်ရင်လုပ်ထားပေါ့။
မူရင်း လင့်ကတော့ ဒီမှာ ....
မိုက်တယ်ဗျာ။ ကျေးဂျူး ဦးဦး။ :77::77::77:
keylogger တွေက အဲလောက်တောင် လွယ်လွယ် ကူကူရနေပြီလား? :2::2:
အရင်တုန်း(တစ်နှစ်လောက်)ကဆိုရင် ကီးလော်ဂါတွေရန်က ဘယ်လိုကာကွယ်ကြပါ .. ဘယ်လိုတားဆီးကြပါ နဲ့ပြောခဲ့ရတာ ဖုတ်(အဲလေ)ဖတ်ဖတ် ကိုမောလို့ .. အခုကြတော့လည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး .. :O အဲဒီလောက်ဖက်ပေါင်းစုံက log ချင်ကြရင်လည်း သဗ္ဗေသတ္တာ ကံမသကာ လို့ဘဲသဘောထားပါတယ်ဗျာ.. သိသူဖေါ်စား မသိသူကျော်သွား ကြပါလေ:D
နောက်ပိုင်းကြရင် ကိုသုံးမဲ့ software လေးတွေကိုဟဟကိုယူသွား... အန်တီဗိုင်းရပ် အန်တီကီးလော်ကာ ထရိုဂျန်ကေလာတွေကို စုပုံပြီးမန်မိုရီစတစ်ထဲ့ထဲ့သွား ဘာမှမသုံးရသေးခင်အ၇င် စစ်လားဆေးလားလုပ် စိတ်ချရပြီဆိုမှ သုံးနဲ့တူတယ်... :D:D ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ကလဲ ဆိုင်ရှင်သဘောကောင်းဦးမှ.... :O:O:O
Mozilla FireFox 3.5.2 မှာတော့ မရသေးပါ။ အဲထက်နိမ့်ရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ်ဗျာ :P:P:P
Security researchers warn ofanew piece of malware that functions as an extension for the Mozilla Firefox browser. The rogue add-on intercepts Google search queries and injects advertisements into the results.
The new attack has been reported by analysts from antivirus vendor Trend Micro and seems to be motivated by illegal monetary gain through an advertising scheme. The threat combines techniques previously employed by different families of malware.
Forastart, it comes under the form ofaFirefox extension, which is rather uncommon. A similar computer trojan running asaFirefox extension, which was used to monitor user sessions and capture online banking credentials for over 100 financial institutions, was discovered back in December 2008.
Dubbed Trojan.PWS.ChromeInject by BitDefender researchers, the malicious extension was being deployed without the users' consent by other malware already present on the infected computers. In comparison, this new Firefox threat, which Trend Micro calls TSPY_EBOD.A, is using social engineering to trick users into installing it.
This new piece of malware is actuallyaclick fraud trojan, which injects ads into Google search-result pages. When these ads are clicked, the trojan's authors are receivingasmall fee from the advertising network supplying them. Back in July, we reported aboutasimilar trojan, which hijacked queries performed through the default search boxes in Internet Explorer and Firefox and routed them throughacustom Google search widget.
Trend Micro analysts note that the rogue extension is also monitoring and intercepting all Google searches performed with Firefox and uploads the captured data toaremote server. This is probably done in order to establish some search trends for the victims and subsequently serve them with ads, which they are more likely to click on.
"We have seenalot of malware target Internet Explorer in the past. This is probably one of the reasons whyahuge number of users are opting to use alternative browsers such as Firefox, Chrome, Safari, and Opera instead. Though this used to be consideredasafe computing practice before, it seems it no longer is with the proliferation of malware targetting [sic.] the most popular alternative Internet browser - Firefox," Jonathan Leopando, technical communications specialist at Trend, concludes.